Anthurium is abaningi abawazi ngokuthi eyaziwa imbali "owesilisa injabulo." Ukuma eziyingqayizivele le mbali ulunika okwakhe ekhethekile. Ngokunakekela efanele, lesi sitshalo kungaba eziqhakaza ngokuqhubekayo unyaka wonke. Izinhlobonhlobo zemibala, ngezindlela ezihlukahlukene futhi ayilingani ikuvumela ukubala ezingaphezu kwamakhulu amahlanu le mbali. Ngenxa isakhiwo engavamile isitshalo ibizwa ngokuthi imbali nge nomsila. ukuphakama kwalo kungenzeka kuze kufinyelele imitha elilodwa. amahlamvu Hard obuluhlaza, njengobhabhulini imicibisholo, ukufinyelela ubude 30 cm. Bakha cluster maphakathi esimelela umndeni omkhulu ezinemibala egqamile, okungaba pink, ezimhlophe futhi zibomvu. Into eyangimangaza kunazo zonke - kuyinto ngokuthi lesi sithombo singakhiqiza eziqhakaza inqubo ukushintsha umbala walo: kusuka pink kuya mhlophe, kusukela obomvu oluhlaza.
Uma uthenge esitolo imbali "injabulo besilisa", ukunakekela kumele kusekelwe nguthishela oluqondile, ngoba kuthinta kanjani lesi sitshalo kuyoba esikhathini esizayo. Ungakwazi sikubeka emuva egumbini, kokuba Ukusabalala okuhle, kodwa ngesikhathi yokuqhuma njalo kangcono uma sikubeka ekuseni ku window, njengoba kwakunjalo ekuseni imisebe yelanga kubalulekile kakhulu.
Ukulandela yokufuna imbali ke kufanele itshalwe emhlabathini futhi acoshe ebhodweni entsha ngokuhambisana lingakanani, spiked nge substrate. Uma kukhona ezinye izimpande umonakalo, izingxenye ezifana yawo kumelwe kususwe kanye Imi indawo fafaza nge namalahle olwembiza.
"Injabulo Male" - imbali ekhethekile, ngakho substrate ukuba kube evundile, ukukhanya crumbly. Isitshalo kumele inikezwe izakhi hhayi kuphela kodwa futhi ukufinyelela emoyeni ezimpandeni. Ukuze lokhu uqweqwe ishidi ofanele futhi Turf emhlabathini, Peat moss, kakhukhunathi fibre, nechobozekile namalahle. Amagxolo ukunikeza ezidingekayo inhlabathi friability. Ngemva kokuqala sikhule futhi yakha amaqabunga amasha, kungaba ibhekwe inqubo acclimation igcwaliswe.
Uma imbali "injabulo besilisa" isetshenziselwa ukukhula kwezingane ke udinga uwubeke ebhodweni, uma inhloso yokuqhuma yayo, ibhodwe ezithathwe usayizi lithé ukuba likhudlwana kune owedlule, noma okufanayo. Kufanele kuqashelwe ukuthi ukwakheka ngokweqile kwezingane kubangela umonakalo ebalulekile ukuze izimbali.
Ukwandiswa umswakama isitshalo akathandi, ngakho-ke kufanele olufuthwe. Ngesikhathi sasehlobo, babili kuphela - ke ezintathu sishaye, kodwa yini edingekayo ukuze ugweme umswakama imbali. Ukunisela kufanele sigcwaliswe kuphela uma kwenzeka ukuthi phansi kungaba ezomile. Izimila eziningi zidinga umswakama esikhathini sokukhula esebenzayo kanye kumiswa izimbali namaqabunga. Ukudala kabusha usesimweni imbali izimo ezishisayo, okuyinto azifane indawo ayijwayele kwendawo yakhe, ungakwazi ukufaka ebhodweni kwi ubumba olumanzi enwetshiwe noma moss ezimanzi ukusonga simila ngokwaso kanye izimpande okuyizinto phezu. Imbali "injabulo besilisa" Kufanele uthole umswakama kanye ukukhanyisa ngobungako kudingeke ukuba ogulayo.
Overdoing zikamanyolo kuyinto engathandeki kakhulu. Umanyolo Liquid kufanele kusetshenziswa khona emakamu engezansi, kungenjalo ungakwazi bashise izimpande zalesi sihlahla. Phakathi nenkathi efudumele isikhathi zalisa imbali akumelwe ibe ngaphansi kuka kanye njalo emavikini amabili nge Umanyolo eziyinkimbinkimbi ne izakhi mkhondo. Ebusika, umanyolo okumele asetshenziswe kanye ngenyanga.
Njengazo zonke izitshalo imbali "injabulo besilisa" ehlaselwa izinambuzane ezifana yizimbuzane, aphid, Jose esikalini. Ngaphezu imikhiqizo Kunconywa yokulwa nazo, ungasebenzisa Folk remedy - ukulungiselela ingxube insipho nesweli.
anthurium ungakhululekile imodi okuqukethwe kuphathelene nani ukuvela izifo ezihlukahlukene. Ihamba ke ngaleso ukungcolisa futhi zinyakaze. Isizathu salokhu kungenzeka ngokungalungile ifaniswe inhlabathi, amanzi wokunisela kunzima kakhulu. Kunoma ikuphi, kudingeka uhlaziye kahle lesi simo.
Ngokunakekela efanele nelungile imbali uyobheka ezinkulu futhi ezimibalabala unyaka wonke.
Lapho ukulondoloza-skrini kwi "windose 8", noma yonke skrini yesistimu yokusebenza
Zokushisela apharathasi "Terminator": incazelo scheme, imfundo manual
I-backpack Demix: izinhlobo, izimfanelo, ubukhulu. Ukufunda ukukhetha i-backspack Demix efanele